यौन स्वास्थ्य | स्वास्थ्य खबरपत्रिका
होमपेज » "यौन स्वास्थ्य" यौन अनिवार्य र अनुभूतिजन्य ! यौन इच्छा दबाउँदा शारीरिक र मानसिक समस्या देखिन सक्छ । कुनै निश्चित सीमा भित्र रहेर सामाजिक मर्यादाको पालना गर्दै यौन इच्छा बिभिन्न माध्यमबाट पूरा गर्नुपर्छ । हस्तमैथुन यस्तो अवस्थामा उपयुक्त माध्यम हुन्छ । पतिमा सम्भोग इच्छा जागेको छ र पत्नीमा जागेको छैन भने समझदारी र धैर्य राख्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा पत्नीलाइ हस्तमैथुन गर्न लगाउने वा [...]
यौन विकृतिको रुप हिजोआज हामीले मानसिक यौन विकृतिका धेरै घटनाबारे सुन्छौं । कतिपय मानसिक यौन विकृतिका स–साना घटना गम्भीर रुपमा लिइन्छन् भने कतिपय गम्भीर घटनालार्इृ पनि हल्का रुपमा लिइने गरेको पाइन्छ । यौन प्राणी जगतका लागि प्राकृतिक आवश्यक प्रक्रिया हो । सन्तानोत्पादन गरी वंश विस्तारको लागि यो झन् आवश्यक हुन्छ । अझ मानिसको हकमा यौनको परिभाषा झन् विशिष्ट [...]
ओहो, उत्तेजनाको कडी ! यौनलाई अनुभूतिको हिस्सा त्यसै भनिएको होइन । कारणः यो विषय मान्छेको संवेग र संवेदनास“ग जोडिएको हुन्छ । त्यसैले पनि यौन उत्तेजना सबैभन्दा पहिला मान्छेको मस्तिष्कले अनुभव गर्छ । यस्तो अनुभवपछि सवै नशामा रगत छिटोछिटो बढ्छ । यही कारणले उत्तेजित अवस्थामा अनुहार पनि रातो देखिन्छ । महिलामा नाक, कान, आँखा, स्तन र योनीको भित्ता फुल्न थाल्छ [...]
गर्भधान अगाडि अपनाउनु पर्ने सर्तकता गर्भधारण एउटा प्राकृतिक नियम हो । गर्भधारणभन्दा अगाडि आमाको स्वास्थ्य, अवस्था, उमेर र शारीरिक तन्दुरूस्ती हेर्नु धेरै उचित हुन्छ । महिलाको उमेर कम छ भने सन्तान पाउनका लागि केही वर्ष पर्खिनु नै पर्छ । गर्भधारण आकस्मिक घटनाका रुपमा नभई योजनाबद्ध हुनुपर्छ । यसो भएमात्र आगन्तुक शिशुकोे शारीरिक र मानसिक विकास पनि राम्रो हुन्छ । [...]
कति बेला गर्ने यौन सम्पर्क ? प्रत्येक व्यक्तिको लागि सम्भोग गोपनीय र निजी कुरा हो । प्रत्येकको सम्भोगमा आ–आफ्नै अनुभव र तरिका पनि हुन्छन् । तर पनि सामान्यतया सम्भोग चरम सुख प्राप्त गर्न केही ध्यान पु¥याउनु पर्छ । सम्भोग क्रिया थाल्नु भन्दा पहिले वातावरणमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । मधुरो उज्यालो, मधुर संगीत, सफा र चहकिलो कोठाले वातावरणलाई रमणीय तुल्याउन मद्दत पु¥याउँछ [...]
यौन असफलता पुरुषको लिङ्ग खडा नहुने, शीघ्रपतन (आनन्द नआई वीर्य खस्ने ), यौन क्रिडाको लामो समयसम्म पनि वीर्य नखस्ने, आनन्द नआउने र महिलामा दुखाइको अनुभव हुनेलगायतका समस्यालाई यौन असफलता भनिन्छ । यौनमा असफल मानिस रुखो, रिसाहा, दुःखी, निरास, चिन्तित देखिन्छन् । उनीहरूमा मानसिक चिन्ता बढ्ने भएकाले अल्सर, दम, टाउको दुख्ने, निन्द«ा नलाग्ने, जीउ गल्ने, कमजोरी हुने, हातखुटटा [...]
यौनसम्पर्कमा रुचि कम गर्ने रोग - स्वास्थ्य खबरपत्रिका \_ साधारणतया हामीले खाएको खाना शरीरभित्र ग्लुकोजमा परिवर्तन हुन्छ । मानवशरीरको प्रमुख शक्तिको स्रोत ग्लुकोज हो । शरीरका सबै अङ्गहरुलाई जीवित राख्न ग्लुकोजको आवश्यकता पर्छ । ग्लुकोजबाट शक्ति उत्पादन गर्ने कार्य शरीरमा रहेका कोशिकाहरुको हुन्छ । ग्लुकोजलाई रगतबाट कोशिकाहरुभित्र प्रवेश गराउन इन्सुलिन नामक हर्मोनको आवश्यकता पर्छ । इन्सुलिन उत्पादन पेटको [...]
निको पार्न सकिन्छ नपुसंकता - डा. एन्जल मगर / सन् १९९० तिर मानिसहरु नपुसंकता (इरेक्ताईल डिस्फन्क्सन) बारेमा एक्दमै कम कुरा गर्थे । लाज र डरका कारण कुरा गर्न अप्ठेरो मान्न प्रवृति थियो । तर १९९८ देखि भियग्राको उत्पादन सुरू भएपछि यो अवस्थामा नाटकीय परिवर्तन आयो । त्यसअघिसम्म नपुसंकता पालेर बेडरूमा खुम्चिनेहरू डाक्टरसम्म पुग्ने वातावरण बन्यो । त्यसपछि [...]
के हो यौन समस्या ? यौन समस्याहरु मूल ३ किसिमका देखिन्छन् । पहिलो यौन चाहना, यौनशक्ति र यौन क्रियाकलापसम्बन्धी गड्बडी , दोस्रोमा यौन क्रियाकलामा व्यक्तिको प्राथमिकतासम्बन्धी समस्या र तेस्रो भनेको आफ्नो लिङ्ग प्रतिको दृष्टिकोणमा आउने गड्बडी हो । मानिसको यौन क्रियाकलापका ४ चरणहरु हुन्छन् । यौन चाहना, यौन उत्तेजना, सम्भोगको चरम विन्दु र यौन क्रियाकलापबाट सामान्य अवस्थामा फर्कने चरण । [...]
गर्भावस्था र यौन सम्पर्क डा. ज्योती अग्रवाल, स्त्री तथा प्रसुतिरोग विशेषज्ञ गर्भावस्थामा प्रायः कस्ता किसिमका समस्या देखिन्छन् ? गर्भावस्थामा महिलालाई धेरै किसिमका समस्याहरू देखिन सक्छन् । त्यसैले गर्भावस्थामा नियमित रूपमा स्वास्थ्य परिक्षण जरूरी पर्छ । यसबाट सम्भावित जटिलतालाई कमगरी गर्भ खेर जानबाट बचाउँन सकिन्छ । गर्भावस्थामा पोषणको कमीले पनि धेरै समस्याहरू देखिन सक्छन् । सरसफाईको [...]